Muummichi-ministaraa Israa’el Godaantota Laalchise Walii-galtee Jaarmayaa Dhimma Koolu-galtootaa Ka Tokkummaa Mootummootaa Waliin Qaban Yeroof Dhaabuf Murteessan
Ebla 03, 2018
Muummichi-ministaraa Israa’el – Benjaamin Netanyahuu, godaantota lammiwwan Afrikaa kuma hedduu biyya isaanii keessa jiran gara biyyoota Addunyaa gama dhihaatti of irraa godaansisuuf walii-galtee Jaarmayaa dhimma Koolu-qaltootaa ka Tokkummaa Mootummootaa waliin qaban yeroof akka dhaabatu beeksisanii jiran.
Mr. Netanyahuun, fuula Feesbuukii isaanii irrratti dhaamsa barreessaniin, haga dhimmi sun daran qoratamutti akka tursiisamu beeksisan.
Hoogganaan Israa’el kun akka jedhanitti, silaa godaantota kuma kuma kudha ja’aa fi dhibba lamaa fi shantama tu biyyoota Addunyaa gama dhihaa akka Kanaadaa, Xaaliyaanii fi Jarmanii keessa qubachiisamuuf turan.
Godaantonni lakkoobsi isaanii haga kanaa gahu kaan Iraa’el keessatti ehama jireenyaa akka argachuuf jiran dubbatan – Netaanyaahuun.
Garuu, labsii kanaa booda, Xaaliyaanii fi Jarmaniin waa’ee karoora kanaa kan quba hin qabne tahuu dubbatan.
Guraandhala dabre immoo, Israa’el, godaantota dhiiraa Afrikaa irraa dhufan kuma digdama ta’an, akka baatii lama keessatti biyya ishee gad-lakksian, yoo ta’uu dhaa baate akka qabamanii hidhaman ajaja itti kennite.
Battaluma immoo, Tel Avid gama Kibbaa – bakka godaantonni kun jiraatan keessaa balaaleffannaan guddaan karoora mootummichaa irratti ka’e.